SPS-FGB Fiber Glass Board Squeegee - China Changzhou Plet Obibi
Ọ bụ ezie na n'ozuzu nsogbu akụ na ụba na 2015, ma na ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ ka enweta ezi ihe, na nke afọ a, ọtụtụ ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ site ngwaahịa njikarịcha, akụ mwekota na ndị ọzọ na mgbanwe, na-enwe olileanya na ngwa ngwa ijide ndị ụlọ ọrụ ahụ na-enye iwu elu, nke na-akwalitekwa The mmepe nke ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ. Dị ugbu a, na ihuenyo-ebi akwụkwọ kemgbe n'ihu mma na mma ma na akpaaka technology, àgwà nkwa technology, na na na ọkwa nke na ngwá na ihe n'ichepụta.
Na mmepe nke ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ, ink, enyocha ebi akwụkwọ meziri, na-ebi akwụkwọ na ígwè ọrụ na-abụkarị ihe na-akpata nchegbu. Otú ọ dị, mmadụ ole na ole nwere mmasị na ihuenyo-ebi akwụkwọ na squeegee. Otú ọ dị, squeegee arụ a isi ọrụ na fineness na nkwụsi ike nke obibi akwụkwọ. The ọrụ. Changzhou Preet Printing Technology Co., Ltd. (abbreviated dị ka "Platt") bụ a ọkachamara soplaya nke ihuenyo ebi akwụkwọ consumables. N'okpuru ya n'enweghị ike ọgwụgwụ nnyocha na ịrụsi ọrụ ike, SPS nkenke Screen Printing na Squeegee nke nta nke nta merie ndị ude nke ahịa na ụlọ ọrụ. Ezi ama. Na 2016, Pratt isi na ngwaahịa ndị SPS-FGB faiba glaasi ịkpụcha na SPS-FGB-AS carbon eriri antistatic scraping.
The uru nke SPS-FGB faiba glaasi scraping bụ na iko eriri osisi na-akwado ndị scraping gluu. Ọ bụrụgodị na ịkpụcha mama bụ tinye na ink ruo ogologo oge, na-obibi na-adịghị adị mfe nkwarụ. Ya mere, SPS-FGB iko eriri board ịkpụcha mama nwere ike inye a ufọk ufene ebi akwụkwọ nsogbu. , Agbanwe agbanwe-ebi akwụkwọ n'akuku, elu abrasion eguzogide ma na mgbaze eguzogide, adabara nkenke ihuenyo-ebi akwụkwọ ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka ezi edoghi, ntụpọ obibi, na film ọkpụrụkpụ, dị ka: ihuenyo mmetụ nwa ọcha na cover ihuenyo obibi, ihuenyo mmetụ TP silver film ọkpụrụkpụ akara (azọpụta 8% Silver Paste), Home ngwa oru Ịchọ Mma Industry Piel Agba & Dot Printing, Home ngwa oru Ịchọ Mma Industry Pearl Powder Printing (Screen Printing Easy Iji ink dee), Automobile Dashboard Industry Sikrob ink na uzo Agba Printing, Light Guide efere Industry Dot Printing, RF Label ọkasị mma Silver Line obibi, photovoltaic okporo akara ebi akwụkwọ na na.
SPS-FGB-AS carbon eriri mgbochi static squeegee bụghị naanị na zuru arụmọrụ nke FGB faiba glaasi squeegee, ọ nwekwara ike hapụ eletrik eme n'oge ebi akwụkwọ usoro. N'ihi na SPS-FGB-AS mgbochi static carbon eriri ịkpụcha mama ka nke conductive carbon eriri osisi na mgbochi static AS ịkpụcha mama, AS ịkpụcha roba nwere ike ịga nke ọma belata ịkpụcha eguzogide uru 10 MΩ, nke nwere ike wepụtara n'oge ebi akwụkwọ usoro. The eletrik, izere electrostatic ìgwè ke ihuenyo ebi akwụkwọ usoro na onu nke na-eru na-efe efe ink, nke nwekwara ukwuu welie àgwà nke ngwaahịa.
Quality enye ngwaahịa ịhụnanya, na-egosipụta na ụlọ ọrụ si agwa, na bụkwa uru maka mmepe nke ụlọ ọrụ. N'ihi na ngwaahịa mma, Prete nditịm akara ngwaọrụ, jiri mere ndị ọkà mmụta sayensị mmepụta Filiks, na kpere rigorous ule usoro. Si n'ọnọdụ nke ahịa òkè, Pret si atụmatụ enweta nnọọ ezi ihe. Ma Pret si arọ agha na ọ bụghị nanị na nke a. Na oge nke ọrụ na-abara ahụmahụ, Pretto etiÚnye ozi mmepe nke enterprise, na nwere a zuru ahịa netwọk na tupu ahịa na mgbe-sales ọrụ usoro. Online tupu sales technical alo nwere ike mụụrụ si ma online na offline ọwa, na rationalization atụmatụ na mgbe-sales Standardization ọrụ nwere ike nwetara n'oge ire, ka afọ ju ndị ahịa chọrọ kacha n'ókè o kwere mee. Pratt ozi: iwebata silk ihuenyo obibi akwụkwọ ọhụrụ ngwaahịa, ọhụrụ Filiks, na-akwalite mmepe nke silk ihuenyo ụlọ ọrụ.